4 Sano kadib: Xukuumad la timid Horumar muuqda iyo Himilo toosan - Somaliland Post
Home Maqaallo 4 Sano kadib: Xukuumad la timid Horumar muuqda iyo Himilo toosan
4 Sano kadib: Xukuumad la timid Horumar muuqda iyo Himilo toosan
01-07-2014-ka, waxay ku beegnayd sannad-guuradii 4-aad ee ka soo wareegtay markii ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Xisbiga Kulmiye oo uu waqtigaa Guddoomiye ka ahaa M/weyne Ahmed M.M.Silaanyo ay ku guulaysteen doorashadii Madaxweynennimada ee dalka ka dhacday 26.06.2010. Xisbiga Kulmiye wuxuu doorashada ku guulaystay xilli ay lagama maarmaan ahayd inuu dalka ka dhaco isbeddel dhab ah oo wata hannaan dawladnimo, hadaf iyo himilo siyaasadeed oo dalka iyo dadkaba ka bed-baadiya haadaantii (jarkii) ay danta-guud ee ummaddu ka sii laalaaday. Wuxuu ahaa xilli la huri waayey in la helo hoggaamiye hore loo shirrabay oo la hubiyey dal-jacaylkiisa, dareenkiisa-waddanimo, u damqashada shacbiga iyo sida uu danta guudba u daryeelo intaba. Sidaa darteed, Guusha ay M/w. Axmed Silaanyo iyo Xisbigiisa Kulmiye 01-07-2010-kii ku guulaysteen talada iyo hoggaanka dalka, may ahayn guul ku kooban intii isaga (M/weynaha) u codaysay ama xisbigiisa taageerayaasha u ahaa oo keliya. Guusha Kulmiye waxay ahayd Bed-baado Qaran oo ay dadka iyo dalka JSL u baahnaayeen taasoo ummadda ka bed-baadisay kana sabato-bixisay jaahwareerkii shacbiga haystay iyo xagal-daacii ku dhacay qarannimada.
La Xisaabtan HAA! Xagal-daacin MAYA!
Xukuumadda hadda talada haysa iyo hoggaankeedaba waa la dhalliili karaa waana lala xisaabtami karaa tallaabo kasta oo ay qaado, dhan kastaba ha u qaadee. Laakiin, xag-xagasho xeeladaysan iyo xagal-daacin ummaddu ma aqbali karaan. Dadka wax dhalliilaya waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan aragti iyo fikir siyaasadeed oo ku salaysan wax toosin iyo wax dhisid, balse aan ahayn wax dumin. Waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan aragti iyo fikir siyaasadeed oo aan ahayn wax-iska-dheh balse ku salaysan xaqa iyo runta oo loo hiiliyo isla markaana xumaanta, xaqdarrada iyo dulmiga oo la diido.Waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan aragti iyo fikir siyaasadeed oo ku salaysan bulshada oo la mideeyo balse aan ahayn bulshada oo la iska horkeeno iyo dhaleecayn aan sal iyo raad toona lahayn oo mar walba warbaahinta lala horfadhiyo. Waxa looga fadhiyaa inay la yimaaddaan aragti iyo fikir siyaasadeed oo ku salaysan waddannimo iyo dal jacay dhab ah, ummaddana u horseedi kara isbeddel dhab ah oo hanka iyo himilada bulshada kobciya.